Zvakajairika matambudziko emhando nema diamond zvikamu
Mukugadzirwa kwenzvimbo yemadhaimani, matambudziko akasiyana siyana achaitika. Kune matambudziko anokonzerwa nekusaitwa mushe panguva yekugadzirwa, uye zvikonzero zvakasiyana siyana zvinoonekwa mukuita kwefomula uye bhainda kusanganisa. Mazhinji ematambudziko aya anokanganisa kushandiswa kwezvikamu zvemadhaimani. Un ...
Premium Quality Honeycomb Diamond Yakaomeswa Polishing Mapedhi eKrete uye Matombo
ne admin pane 21-09-02
Iyo yepamusoro mhando huchi hwedhimoni doma yakaoma yekukorobha mapads akagadzirwa nehupamhi hwehuwandu hwemadhaimani emhando yepamusoro uye resin yepamusoro kirasi, ndapota usazvidya moyo nezvekuti vanozosvibisa kana kupisa pasi rako pamusoro. Ivo vanogona kushandiswa nechero angle grinder kupurinda huwandu hwakaoma m ...
Chiyero chekutakura mumusika wekutakura midziyo unorova imwe nyowani yepamusoro
Dambudziko remusika wekutakura rakaoma kugadzirisa, izvo zvave zvichikonzera kuenderera kuri kuwedzera kwehuwandu hwekutakura zvinhu. Izvo zvakamanikidzawo mutengesi wemuAmerican hofori Walmart kuti achengete ngarava dzayo kuti ave nechokwadi chekuti pane kukwana kwakaringana uye nhamba yekusangana nemikana yekufarira bhizinesi ini ...
Iyo Yakanakisa Wet Makorari Mapedhi ePolishing Granite, Marble uye Matombo
Aya manyoro wedhaimani makorari mapads akakosha kupora girenayiti, machena, uye dombo rechisikigo. Iyo madhayamondi mapedhi anoshandisa yakakwira giredhi mangoda, yakavimbika patani dhizaini, uye premium yemhando yepamusoro resini, yepamusoro-kirasi velcro. Hunhu uhu hunoita kuti mapureti epurasitiki chive chigadzirwa chakanakira vagadziri, vanoisa, ...
Muna Nyamavhuvhu, iwo mutengo wakakura wesilicon nitride iron poda (Si: 48-52%, N: 30-33%, Fe: 13-15%), iwo wakanyanya mutengo wemusika waiva RMB8000-8300 / tonne, yaive RMB1000 / tonne yakakwira kupfuura pakutanga kwegore, kuwedzera kweinenge 15%, nepo kuwedzera kwemutengo kwaipfuura 20% ...
Diamond Wet makorari Mapedhi
Dhaimondi yakanyorova mapureti ndeimwe yezvigadzirwa zvikuru zvatinogadzira. Ivo sintered ne inopisa yakatsimbirirwa yedhaimani hupfu uye mamwe mafiringi ane resin bond. Kambani yedu yakavaka yakasimba-yekutarisisa sisitimu yekudzora mhando yezvakakwenenzverwa, inoenderana neyedu yakakura yekugadzira ruzivo, ...
Ceramic Bond Dhaimani Shanduko Polishing Mapedhi
Bontai yakagadzira chitsva checeramic chisungo shanduko yedhaimani polishing pads, ine dhizaini yakasarudzika, isu tinotora mhando yemadhaimani uye zvimwe zvinhu, kunyangwe mamwe akaunzwa mbichana materails, needu akakura maitiro ekugadzira, ayo anovimbisa zvakanyanya kunaka kwayo. Tine 3 ″, 4 ″, 5R ...
Nzira ina Dzinoshanda dzeKuwedzera Sharpness yeDiamond Grinding Segment
Dhayamondi ichikuya chikamu ndicho chinonyanya kushandiswa dhaimondi chishandiso chekugadzirira kongiri. Inonyanya kushandiswa pakutenderera pasimbi yesimbi, isu tinodaidza kuti zvikamu zvese zvinosanganisira simbi yesimbi uye madhaimani ekugedza semgents sedhaimondi yekukuya shangu. Mukuita kwekugaya kongiri, pane zvekare dambudziko ...
PCD Kukuya Maturu Ekubvisa Epoxy, Kupfeka kubva pasi pevhu
Polycrystalline diamond inonziwo PCD, inoshandiswa zvakanyanya kubvisa epoxy, glue, pendi, mastic, machira kubva pasi pevhu. Tine huwandu hwakasiyana hwezvigadzirwa zvePCD, zvinosanganisira shangu dzePCD dzekukuya, PCD yekugeda mukombe mavhiri, PCD yekugaya ndiro. Tine dzakasiyana PCD segme ...
Matatu Makuru Maitiro Ekuvandudza kweChina's Abrasives Indasitiri
Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwemusika uye tekinoroji, zvetsika makambani ekukuya ari kuramba achivandudza, vatambi vatsva muindasitiri vakasimuka imwe mushure meimwe, uye kusangana kweanogadzira maindasitiri epamusoro akatenderedza abrasives uye abrasives kwakawedzerawo. Nekudaro, sekufurira ...
Musiyano wekukuya Concrete Floor neKusiyana Hukuoma
Concrete kukuya inzira yekubvisa yakakwira mapoinzi, zvinosvibisa, uye zvakasununguka zvinhu kubva kukongiri pamusoro uchishandisa muchina wekukuya. Paunenge uchikuya kongiri, chisungo cheshangu dzedhaimani chinofanirwa kuve chakapesana nekongiri, shandisa chisungo chakapfava pane yakaoma kongiri, shandisa simbi yepakati b ...
Newest Dhizaini Sponge Base Resin Kukwesha Mapedhi eKrete Concrete
Nhasi tave kuzozivisa yedu yazvino madhaimani polishing mapedhi, isu takaidaidza kuti Sponge base resin polishing pads, ayo anoshandiswa zvakanyanya kupora kongiri uye terazzo pasi. Ivo vane maviri mamodheru esarudzo yako, imwe ndeye turbo chidimbu chimiro ne5mm diamond kukora ...